दायित्वलाई के छोड्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki Indemnification
ऋण र ऋण को लागी दायित्वबाट छूट तपाईंको क्रेडिटमा पनि असर पर्दछ?
सायद तपाईंले यो प्रश्न सोध्नुभयो, तथापि, देयताको यो छूट कुनै पनि ऋणको लागि सम्भव छैन। यो आफैमा दुई अवधारणाहरूको अवधारणा हो। एकै ओर देयता र अर्कोमा छुट। सार्वजनिक रूपमा सब्सिड गरिएको ऋणको सन्दर्भमा, उदाहरणका लागि क्रिडिटिस्टल्ट फ्युर विइडिराउफाउ (KfW) मार्फत, यो निस्क्रिय व्यक्तिहरूको लागि छुट व्यक्तिको लागि अवस्थित छ। दायित्व को छूट एक स्व-नियोजित व्यक्ति र उनको उद्यमशीलता गतिविधि को स्कोरिंग र श्रेयता बढावा दि्छ। व्यापार सुरुवात सुरु गर्नाले सामान्यतया सुधारिएको उधारोपनको लागि संघर्ष र ऋण दिने। तपाईंले पहिले नै यो अवधारणाको महत्त्वलाई मान्यता दिनुभएको छ। प्रत्येक क्रेडिटको लागि, छुटकारा र पुन: भुक्तानीको जोखिम अवस्थित छ। प्रत्येक उधारकर्ता निकट नजिकै छानिएको छ र उनको क्रेडिटपुन परीक्षणमा राखिएको छ। संपार्श्विक एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, तर सामान्यतया यी स्वयं-नियोजित संपार्श्विक सामान्यतया धेरै कमजोर हुन्छन्। को Indemnification एक ऋण को समर्थन को लागि एक सहायता हो। केएफडब्ल्यू बैंकले यस समूहमा विशेष रूपमा माहिर गराउँछ, जसले यसको मतलब छैन कि निश्चित नियमहरू देखा पर्दछ।
युवा उद्यमीहरूको बीचमा सुधारिएको उदारीकरण
व्यापार सुरुवातका लागि काम गर्नका लागि, तपाईंलाई व्यापार योजना चाहिन्छ। उनीहरूलाई पनि वित्त पोषण र आत्म-नियोजित उद्यमीहरूको रूपमा सुरु गर्न आवश्यक छ। यो केवल आर्थिक ढाँचाको नतीजा हो र तपाईले पनि थाहा पाउनु भनेको के हो भन्ने हो। विशेष गरी व्यवसाय सुरुवातको मामलामा, वित्त सामान्यतया पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। निस्सन्देह, राज्यले सहायता प्रदान गर्दछ, किनभने यसको रुचि भनेको छ कि धेरै कम्पनीहरू भेटिन्छ र बजारमा पर्छन्। KfW पहिलो व्यवसाय विचार र विशेष कार्यक्रमहरू संग सम्बन्धित ऋणहरू, जो देयता छूट संग प्रदान गरिन्छ, यो निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यसैले यो राज्य दायित्व र यी विशेष ऋणहरूका लागि उत्तरदायित्वबाट राज्य छूट छु। तर, केएफडब्ल्यू बैंकले मात्र आत्म-रोजगारीलाई बढावा दिन्छ, तर निजी ऋण जसमा उद्देश्य उद्देश्य सम्बन्धी सम्बन्ध छ, यसले KfW द्वारा समर्थित छ। आफैलाई रोजगारीको लागी आफ्नो ऋणको लागी आफैलाई पालन गर्नुहोस्, त्यो तपाईंको लागि तार्किक हो। यद्यपि, सामान्यतया अन्य बैंकहरूको लागि पर्याप्त छैन भने ऋण प्रदान गर्न योग्यता खराब छ। यस सम्बन्धलाई सुधार गर्न राज्यले यी ऋणहरूको स्व-नियोजित व्यक्तिहरूको छुटको कल्पना गरेको छ, र यो आफैं बांडको सदस्य हो। केएफडब्ल्यूका अलावा, त्यहाँ एसएमई बैंकहरू र विकासशील बैंकहरू पनि छन् जो संघीय राज्यहरूले सञ्चालन गर्छन्। यहाँ, पनि, एक क्रेडिटको लागि सोध्न सक्छ जुन दायित्वबाट छूट दिइएको छ।
स्व-नियोजित व्यक्तिहरूको लागि सार्वजनिक बैंकहरूको दायित्व उदाहरणहरू
सिद्धान्त सधैँ छ कि हरेक व्यक्ति उनको ऋणको लागि उत्तरदायी छ। सरकारी एजेन्सीहरू र तिनीहरूका बैंकहरू, यो दायित्व जोखिमलाई देयता छूट मार्फत लिन सक्दछ। दायित्व को छूट सामान्यतया अभ्यास छैन, तर विशेष गरी यस उद्देश्यको लागि सिर्जना गरिएको छ। घर बैंक,% 100 गर्न दायित्व छुट को मामला मा ऋण प्रदान यो व्यावहारिक संसाधन विकास बैंक द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ र 50% छुट र अन्य प्रोत्साहन पनि छ। यसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि जिम्मेदार व्यक्ति को समूह को लागी देयता को छूट को लागि प्रदान गरिन्छ। छुटकारा को घटना र क्षति को एक मामला मा, राज्य विकास बैंक मार्फत प्रवेश र ऋण र यसको परिशोधन लागि उत्तरदायी छ। कम से कम आवेदक को लागी दायित्व दायित्व प्राप्त गर्न को लागी संपार्श्विकको रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। तपाईं अहिले यो अवधि उद्देश्य ठीक के हो र अवधि को के प्रयोग Indemnification छ बुझ्छु।
अघिल्लो लेखउत्सर्जन क्रेडिट
अर्को लेखबंधक को अधिकतम रकम